All News Collection Happened in Rakhine: ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သုံးရက်ကြာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်
This blog has collected and described all news happened in Rakhine and related with them
ဤဘလော့ဂ်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းများအား Android ဖုန်းဖြင့် အလိုအလျောက် Online/Offline ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဤနေရာတွင် Click နှိပ်၍ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါပြီ။
၀င်ကြည့်ရင်းနဲ့ သဘောကျရင် Like လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သုံးရက်ကြာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ရခိုင်နှစ်ပါတီ အပြီးသတ် ပေါင်းစည်းနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ရေး၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အသစ်များ ရွေးချယ်ခြင်း အပါအ၀င် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ သုံးရက်ကြာ အစည်းအဝေးကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးကို သြဂုတ် ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ သုံးရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ပါတီနှစ်ခု ပေါင်းစည်းရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ၁၅ ဦးမှ ငါးဦးအား အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပါတီများဖြစ်သည့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီတို့ကို "ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (Arakan National Party)" ဟူသော အမည်ဖြင့် ပူးပေါင်းသွားရန် ဇွန် ၁၇ ရက်က သဘောတူညီချက် ၁၁ ချက်ဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သဘောတူညီချက်များအရ ပါတီတစ်ခုစီမှ ရွေးချယ်ထားသူ ၁၅ ဦးစီဖြင့် ယာယီဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ညွှန်ကြားထားသော တရားဝင် ပူးပေါင်းနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို လာမည့် သြဂုတ် ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထား ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကာ ယခုကျောက်ဖြူ အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၏ အလားအလာများကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(သတင်းအရင်းအမြစ်- Eleven Media Group)
Posted by Than Htoon at 12:51 PM
Labels: ပါတီ, ရခိုင်, အမျိုးသားရေး, နိုင်ငံရေး
မိမိသုံးနေသော IP လိပ်စာ
ကျွန်တော်၏ ဘလော့ဂ်အား လာရောက်ကြည့်ရှုနေသူများ
Time in Yangon (rangoon)
မိမိ၏ဖုန်းဖြင့်ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဤနေရာတွင် Download ဆွဲပါ
HIV/AIDS ကုသရေး ဆေးမြီးတိုဖြင့် လမ်းလွဲလိုက်ကြဆဲ
ဆေးမြှီးတို အယူအဆ ပပျောက်ရေး ART ဆေးဝါး လက်လှမ်းမီဖို့ လိုသည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters) HIV ရောဂါပိုးနှင့် AIDS ရောဂါများကို ဆေးမြီးတိုဖြင့်က...
စားကျက်ရှား၍ ရခိုင်၌ ကျွဲ၊ နွားမွေးမြူရေး ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် ခက်ခဲနေ
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင် မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင် ဒေသများအတွင်း ကျွဲ ၊နွားတိရစ္ဆာန်များအတွက် စားကျက်မြေ ရှားပါးလာခြင်...
မူလတန်းကျောင်းများ ပြန်လည်မွမ်းမံရေးအတွက် လက်ထောက်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးက မာန်အောင်မြို့နယ်တွင် ငွေကောက်
နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ကျောင်းသားမိဘများထံမှ ငွေကောက်ခံခြင်း၊ တောင်းခံခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ထိရောက်စွာ အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ကျေညာချက် ထ...
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောမြေအား ခေတ္တတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ စီမံကိန်းဦးစီး အရာရှိက ဂရန်ဖောက်ကာ အပိုင်စီး
ကျောက်ဖြူမြို့၊ မင်းပြင်အုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်(၄၉၀)၊ မင်းပြင်မြောက်ကွင်း အတွင်းရှိ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောမြေ (၁၁.၀၀)ဧကအား ကျောက်...
စစ်တွေ၌ လိင်ဖျော်ဖြေရေး ပေါ်တင် လုပ်ဆောင်နေ၍ ပိတ်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင်း စားသောက်ဆိုင် အမည်ခံ အနှိပ်ခန်း၊ ကာရာအိုကေခန်းများ၌ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ လုပ်ကိုင်လာခြင်းကြေ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ မောင်တောမြို့နယ်သို့ ရောက်ရှိ စစ်ဆေး
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်၊ ဦးမောင်စန်ရွှေ (စီမံဘဏ္ဍ ဝန်ကြီး)၊ ဦးကျော်သိန်း(သစ်တော၊ သတ္တုဝန်ကြီး)၊ ဦးကျော်ယဉ်ဦး (ပြည်နယ် လဝ...
Genocide (သို့) ရခိုင်များကို သတ်ကွင်းထဲသို့ ဆွဲခေါ်ခြင်း
Genocide (သို့) ရခိုင်များကို သတ်ကွင်းထဲသို့ ဆွဲခေါ်ခြင်း -------------------------- -------------------------- --- ၂၀ ရာစု ကတည်းက တွင...
Copyright by Arakan News Collection (2013). Simple theme. Powered by Blogger.